China Hub Be factory na ndị nrụpụta | Na-emighị emeri Yong
Ihe owuwu a bu oche ndi mmadu, nkpuchi, mgbanaka di n'ime, onu, ihe mmeghari, ihe omimi ABS, mgbanaka ntinye, nkpa ike di elu, ihe ndi ozo na ihe ndi ozo.
The ehiwe amị unit na-mepụtara na ndabere nke ọkọlọtọ angular kọntaktị bọl amị na tapered ala agba. Ọ na-ewe ebe abụọ nke biarin n’ozuzu ya. Ọ nwere uru nke ịrụ ọrụ nke ọma, na-ewepụ mmezi nkwụsị, ịdị arọ dị mfe, usoro kọmpat, ikike ibu buru ibu, ịmị akara nwere ike jupụta griiz tupu oge ahụ, a ga-ewepụ akara akara mpụga na mmezi bụ n'efu. Ọ na-e ọtụtụ-eji na ụgbọala E nwekwara a na-emekarị nke iji nwayọọ nwayọọ na-ịgbasa ngwa nke gwongworo.
Shandong qianyong ibubata na mbupụ ahia Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke ụgbọala ehiwe biarin. Na mgbakwunye na outsourcing akụrụngwa, ụlọ ọrụ nwere akụkụ ya mmepụta akara, akpaka okpomọkụ ọgwụgwọ akara, ụgbọelu, elu gburugburu, raceway, n'ime gburugburu, superfinishing na ngwaọrụ ndị ọzọ; tumadi arụpụta ụgbọala wheel ehiwe, erughị ala wheel, n'iru igwe, ntụ oyi, UC elu nọ, Ugbo ígwè, miri uzo bọl, na-abụghị ọkọlọtọ na ndị ọzọ nkọwa nke biarin. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọmarịcha mmepụta teknụzụ, akụrụngwa dị elu, ụzọ nchọpụta zuru oke na mma ngwaahịa siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya. The ngwaahịa na-ihu ọma na-ere ka Europe, America, Southeast Asia, Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara.